Arsenal oo loo sheegay qiimaha ay ku heli karto Weeraryahan ka tirsan Kooxda Celtic – Gool FM
(England) 30 Abril 2020. Kooxda Celtic ayaa lagu soo waramayaa inay 25 milyan oo gini ay dul dhigtay xiddigeeda weerarka ka dheela ee Odsonne Edouard, kaas oo la la xiriirinayo inuu u dhaqaaqayo Arsenal.
Naadiga Gunners ayaa la fahamsan yahay inay aad u dooneyso adeegga xiddiga reer France bartilmaameed macquul ah marka uu dib u furmo suuqa kala iibsiga, iyadoo shaki la gelinayo mustaqbalka kabtanka Arsenal ee Pierre-Emerick Aubameyang.
Jariiradda Express ayaa sheegeysa in tababaraha Arsenal ee Mikel Arteta inuu taageere weyn u yahay Edouard, laakiin waxay qaadan doontaa dalab ka badan 25 milyan gini oo ay Arsenal ka siisay Celtic xagaagii la soo dhaafay Kieran Tierney si ay uga soo kaxaystaan kooxda haysata horyaalka Scotland.
Qandaraaska 22-sano jirkaan ee kooxda Celtic ayaa dhici doona illaa 2022-ka, taasoo la micno ah in kooxda Neil Lennon aysan si dhaqso ah ugu baahneyn inay iska iibiso, isla markaana ay ku rajo weyn yihiin inuu weli heshiis cusub saxiixi karo.
Everton ayaa sidoo kale la la xiriirinaayey inay u dhaqaaqdo xiddiga heerka caalami ee dalka France, kaasoo dhaliyay 27 gool, isla markaana abuuray 19 gool tartammada oo dhan xilli ciyaareedkan.
Guud ahaan shanta horyaal ee ugu waa weyn Yurub kaliya weeraryahanka kooxda Lazio ee Ciro Immobile ayaa ka goolal badan xilli ciyaareedkan, iyadoo Odsonne Edouard uu dhaliyay 21gool, isla markaana uu caawiye ka ahaa 12 kale oo horyaalka Scotland ah.